Jidka Dhabta Ah! Boqortooyada Ilaahay ayaa dhawaan imanaysa! TheTrueWay.xyz | Xaqiiqooyinka Kitaabka Quduuska ah ayaa la sharaxay - Jidka runta ah - TheTrueWay.xyz & jwjw.org
Jidka Dhabta Ah! Boqortooyada Ilaahay ayaa dhawaan imanaysa! TheTrueWay.xyz
Jidka Dhabta Ah! Boqortooyada Ilaahay waa soo dhowdahay!
Hadalka Ilaahay waa what dadku waa inay eegaan. Waa iftiinka quruxda badan ee runta ah oo ka caawin kara dadka inay toosiyaan cibaadadooda xagga Ilaaha Qaadirka ah.
Hadafka dhaqdhaqaaqani waa in dib loogu noqdo sida ugu macquulsan caqiidooyinka asalka ah ee xertii ugu horreysay ee Masiixa, oo meesha ka saaraysa caqiido been ah oo soo dhex galay. Cibaadada saafiga ah ee xertii ugu horeysay ayaa loo yaqaan "Jidka"Falalka 9: 1-2). Sidaa darteed, howlgalkan waxaa loogu yeeraa Jidka Dhabta ah.
Mareegtan waxa loogu talo galay in dadku ku daabacaan sheekooyinka iyo mawduucyada ayaga ama wasaarad!
Runtu dhib ma leh in wax la iska weydiiyo ee beentu.
Waxaa jira rag iyo ururo badan oo doonaya in dadku ay iyaga eegaan, iyagoo sheeganaya inay haystaan ​​taageerada Ilaah oo sameeya calaamado awood leh. Laakiin dadka Ilaah lama khiyaanayn doono. Hadalka bani-aadmiga wuxuu keenaa quus. Jeremiah 10: 23
Kuwa Ilaahay jeceli waxay had iyo jeer u eegi doonaan fariimaha Ilaahay si ay u hubiyaan una hanuuniyaan. Boggan waxa uu dadka ka caawiyaa in ay hubiyaan waxa ay aaminsan yihiin iyo in ay dib u hagaajiyaan cibaadadooda, haddii loo baahdo, iyo si ay xidhiidh wanaagsan ula yeeshaan Ilaaha Qaadirka ah. Falalka 17: 11-12
Waxaa laga yaabaa inaad dareento inaadan u baahnayn inaad hubiso waxa aad aaminsan tahay. Taasi waa dhab ahaan waa cadowga weyn Ilaaha Qaadirka ah ayaa raba inaad ka fikirto. Wuxuu rabaa dadku inay raacaan ereyga dadka halkii ay ka raaci lahaayeen kan Ilaah. Iscasilaaddu waxay noqon kartaa khatar.
Booqo kooxda Facebook
© 2022 Jidka Runta ah! Boqortooyada Ilaahay ayaa dhawaan imanaysa! TheTrueWay.xyz